Soomaaliya: Doorasho ka socotay Muqdisho oo la hakiyay
Posted On 24-02-2018, 03:59PM
MUQDISHO, Soomaaliya - Gudiga Doorashooyinka Madaxa-banaan ee Soomaaliya ayaa maanta hakiyay doorasho ka dhacaysay magaalada Muqdisho, oo lagu dooranayay Kursi ka banaan Gollah Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Hakinta ayaa timid kadib markii buuq iyo gacan ka hadal ka dhaceen goobta doorashada, taasi oo ka dhalatay murmeen dhexmaray Ergada, Kor-joogtada iyo Mas'uuliyiinta ka socotay Gudiga Doorashooyinka.
Xaliima Yareey oo ah Gudoomiyaha Gudiga Doorashada oo Hoolka Doorashada ka hadashay ayaa ku dhawaaqday in dib loo dhigay doorashada, islamarkaana ay tallaabo ka qaadi doonaan cida ka dambaysay fowdadii maanta dhacday.
Kursigan ka banaan Gollaha Shacabka waxaa ka geeriyooday sanadkii tagey Xildhibaan lagu magacaabo Saciid Xasan Geedi, oo kasoo jeeda Habar-Carfoon (Gadabuursi), oo kamid ah Beelaha dega gobollada Waqooyi ee dalka Soomaaliya [Somaliland].
Buuqa ayaa ka dhashay Khudbad uu jeediynayay mid kamid ah musharaxiinta, kaasi oo dhaliilay sida loo soo xulay ergada doorashada, oo uu sheegay in la musuq-maasuqay.
Labo musharax oo uu kamid yahay Wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Faarax Saciid Xasan iyo Cabdiraxmaan Axmed Ceynaan, ayaa ku tartamayay Kursiga Xildhibaanimada, balse la joojiyay maanta, islamarkaana dib loo dhigay doorashadiisa waqti aan la cayimin.
Gollaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxaa wali ka banaan Labo Kursi oo mid uu yahay kan maanta doorashdiisa la hakiyay, iyo mid kale oo uu isna ka geeriyooday Bootaan Ciise Caalin, oo deegaan doorashadiisu tahay Galmudug.
Xiisad ka dhalatay dilka gudoomiyihii degmada Hodan
Uganda: Taliye ka howlgalay Soomaaliya oo la dilay
Shirweynaha ururka warbaahinta Puntland oo la mudeeyay
Al-Shabaab oo weerar khasaaro sababay ka fulisay Kenya